Accueil > Gazetin'ny nosy > Ambatofinandrahana: Dahalo 4 sy mpanaradia 3 no maty tamin’ny fifampitifirana
Ambatofinandrahana: Dahalo 4 sy mpanaradia 3 no maty tamin’ny fifampitifirana
Tao amin’ny kaominina Amboropotsy ao amin’ny distrikan’Ambatofinandrahana no nitranga indray ity fifandonana mahatsiravina izay nitranga teo amin’ny mpanaradia sy ny dahalo ity. Ny alarobia faha 01 novambra 2017 no notafihin’ny dahalo ny tananan’i Manamy ao amin’ny kaominina Mandrosonoro. Omby miisa 60 no lasan’ny dahalo tamin’izany. Avy hatrany dia raikitra ny fifanenjehana sy ny ady teo amin’ny dahalo sy ny vahoaka. Tonga nanampy ireo fokonolona koa ny miaramila antsoina hoe DAS ( detachement autonome de securité) izay miisa 6. Voalaza fa dahalo 60 lahy koa no nanafika ity tanana ity. Nandeha nihazo ny toerana any Ikalamavony ny dian’ireto dahalo ireto sy ny omby nangalariny. Tonga tao amin’ny kaominina Amborompotsy izy ireo ny alarobia faha 02 novambra 2017 maraina. Raikitra ny ady nifanaovan’ny dahalo tamin’ireto fokonolona ireto. Ny fokonolona izay niisa 30 teo ho eo niampy ny miaramila enin-dahy. Maty vokatr’izany ny dahalo 4, nisy koa fokonolona 3 maty ary naratra mafy ny miaramila 2 lahy. Nandositra ireo dahalo sisa raha ny loharanom-baovao hatrany. Tao amin’ny tanàna antsoina hoe Tambohobe ao atsimon’i Midongy andrefana no nitrangan’ity ady mahatsiravina ity. Nahatratra ora roa mahery ny fifandonana teo amin’ny roa tonta raha ny loharanom-baovao hatrany. Toa ireo tany an’ady hita amin’ny fahita lavitra ireny no zavatra nitranga. Tafaverina amin’ny tompony ny omby rehetra, nefa aina no takalon’izany hoy ny mpitantara.
Ny distrikan’ Ambatofinandrahana dia isan’ny faritra tena anjakan’ny dahalo. Ny tiana homarihina dia hita koa fa misy ny ezaka ataon’ny komandà ny kaompanian’ny zandary vaovao ao amin’ity toerana ity hatramin’ny roa volana izay. Matetika dia hitan’ny olona manaradia ity lehiben’ny zandary ity mitarika ny zandary namany. Efa nahitana vokatra maromaro izany na dia mbola tsy ampy aza. Mbola sarotra nefa no asa miandry ity olona ity satria mahazo vahana loatra ny asan-dahalo teo aloha teo. Efa nitsahatra ny fanafihana tao Ambatofinandrahana renivohitra tato ho ato. Ny any amin’ny manodidina nefa dia mbola manjakana ny asan-dahalo.
Ity fanafihana tao Tambohobe ity izany no asan-dahalo isan’ny lehibe tao amin’ny distrikan’ Ambatofinandrahana tao anatin’ny roa volana izay.